लक्ष्मी बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १९ जेठ २०७६)
बैंकले शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको छ । संस्थापकतर्फको ९ लाख ५ हजार ५१२ दशमलव ४५ कित्ता संस्थापक शेयर सर्वसाधारणमा परिणत भएको हो । शेयर परिवर्तनपश्चात् बैंकको शेयर स्वामित्व संस्थापकतर्फ ५१ र सर्वसाधारणतर्फ ४९ प्रतिशत कायम भएको छ । हाल बैंकको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ९२ करोड ५ लाख ९ हजार छ । यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकले रू. १ अर्ब २ करोड ९६ लाख ३३ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत आवको यसै अवधिमा रू. ८६ करोड ११ लाख ९७ हजार थियो ।
गत आवको तुलनामा चालू आव बैंकको नाफा वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. ७० करोड ५५ लाख ३६ हजार छ । प्रतिशेयर आम्दानी भने रू. १५ दशमलव ३९ छ । बिहीवार भएको शेयर कारोबारमा बैंकको शेयरमूल्य अघिल्लो दिनको भन्दा १ अंक बढेर अन्तिम मूल्य रू. २२५ कायम भएको छ ।
2019-06-02 - 187 view(s) - abhiyan